Taariikh Nololeedka Bollywood Action Hero Sunny Deol Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) | Filimside.net
Home » . » Taariikh Nololeedka Bollywood Action Hero Sunny Deol Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
Taariikh Nololeedka Bollywood Action Hero Sunny Deol Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
Ajey Singh Deol balse sida guud loo yaqaano Bollywood Action Hero Sunny Deol waa mid kamid ah xidigaha ugu caansan Bollywoodka sido kale wuxuu kujiraa liisla xidigaha taariikh ahaan Fanka India awooda ku qabsadeen xiliyo kala duwan.
Sunny Deol Waa curadka halyeyga Bollywoodka ee Dharmendra, waxaana uu ka weyn yahay walaalkiis Bobby Deol oo isaguna ah aktar jila filimada Hindiga, sidoo kalena Deol waa filim soo saare
Intuu ku guda jiray xirfaddiisa aktarnimo waxa uu labo jeer ku guuleystay abaal marinta Shirkada Filimfare Bixiso sido kale wuxuu kalo hantay tiro labo jeer ah abaal marinta ugu weyn India ee National Filim Award.
Sida Shabakada Box-officeka xaqiijisay Sunny wuxuu ahaa 90kii atooraha ugu awooda badan dhanka Box-officeka (Star-Power) taas na dood kama taagnen waayo halyeeygan wuxuu 90kii la yimid filimo taariikhi ah oo fanka Hindiya baal dahabi ah ka galeen.
Sunny Deol Iyo Bilawgii Noloshiisa Marxaladihii Ay Soomartay:
Sunny Deol waxaa iska dhalay Bollywood Original Action HeroDharmendra iyo Prakash Kaur, Sunny waa canugga ugu wayn Dharmendra waana wiilka kaliya ee wiilashiisa ku dayday dhanka qaab jiliin ahaan waxaa la sheega Sunny inuu xitaa ka karti badnaa aabihiis Dharmendra inkasto Dharamjii maqaamkiisa aan lo dhowaan karin sido kalena Sunny taagero buuxdo ayuu u yahay Aabihiis marka Bollywooodka la joogo, eedadiis waa Hema Malini, waxaa la dhashteen walaalkiisa Bobby Deol iyo labo gabdhood oo la kala yiraahdo Vijayta Deol iyo Ajeeta Deol kuwaasoo haatan deggan California.
Sidoo kale waxaa jira labo gabdhood ee kale oo uu dhalay aabihiis Dharmendra oo la dhashay Sunny Deol kuwaasoo oo kala ah Esha Deol oo Aktarad ah iyo Ahana Deol, waxaa labadan gabdhood hooyo u ah Hema Malini halka uu jiro wiil ay ilmo adeer yihiin kaaso lagu magacaabo Abhay Deol waana jilaa.
Sunny Deol wuxuu ifka kusoo biiray oo uu dhashtay 19 Oct sanadkii 1956 waana 61 jir aanan ka muuqan da’daas wuxuu ku dhashtay gobolka Punjab gaar ahaan xaafada Sahnewal wuxuuna kasoo jeeda dadka heesta diinta Sikh.
Sunny Deol Iyo Waqtigii Uu Kusoo Biiray Bollywoodka Maqaamka Sarena Ka Gaaray:
Deol Filimkiisa ugu horeyay wuxuu sameyay sanadii 1983 waana filimka jaceylka ah ee Betaab kaaso noqday Blockbuster sido kalena Sunny ka saaciday inuu markii ugu horeysay u tartamo abaal marinta Filimfare Award qeybta atooraha ugu wanaagsan waxaana filimkaan lahogaamisay Amrita Singh.
Intaa kadib xidigaan waxaa u xigay filimkii 1985 la daawaday Arjun ee uu Director ka ahaa Rahul Rawal kaaso uu ku matalay wiil yar oo nolosha rajo kaleh sido kalena baaga muundo ama shaqo la’aan ah wuxuu noqday filimkaan mid guul fiican gaaro sido kalena Sunny ka saaciday inuu guushisa sii wadan karo iyo darajada Action Hero oo uu markaa u tilaabsaday.
Sanadkii 1986 wuxuu filim kala soo muuqday aabihiis Dharmendra filimkii Sultanat kaaso uu markale halyeeygan ku muujiyay Action heer sare ah Sunny waxaa lagu sheega inuu kamid yahay xidigaha dunida oo dhan ugu caansan kuwooda shaashada kaga run sheegaan waxaana mooda markaa aflaamtisa daawaneyso si run ah inee wax udhacayaan qaab jiliinkiisa cajiibka ah awged maadama dalka Marekanka uu kusoo bartay waab jiliinka.
Dhamaadkii 80kii Sunny wuxuu sameyay filimo dhowr ah kuwaas oo xidigaan guulou gaarin waxaana kamid ahaayen filimada kala ah Dacait (1987), Yateem (1988) iyo Paap Ki Duniya (1988).
Balse sanadkii 1989 ayuu xidigaan wacdaro xoogan dhigay maadama labadiisa filim ee uu la yimid sanadkaa Tridevi iyo Chaalbaaz Hit waaweyn noqdeyn taa waxaa kasii daran in 1990 uu la yimid filimka Blockbuster weyn noqday Ghayal.
Ghayal wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan sanadkaas soo xareyo wuxuuna noqday Blockbuster weyn sido kale sanadkaan Sunny wuxuu kamid noqday xidigaha ugu awooda badan Bollywoodka waxaa kaloo xusid mudan in filimkaan uu ku qaatay abaal marinta atooraha ugu wanaagsan ee Shirkada Filimfare bixiso markii ugu horeysay sido kale National film award abaal marin qaas ahna waa lagu siiyay.
wuxuu Sunny kamid yahay xidigaha faro kutirska ah ee hal filim kuwada qaaten abaal marinada waaweyn ee National Film Award iyo Filimfare Award waxaana iskoor kaan Sunny usahlay bandhigiisa wacnaa ee Ghayal.
Wixii Ghayal kadambeyay si awood ku dheehan ayuu fanka Hindiya kula wareegay Halyeeygaan qaasatan bartamihii 90kii maadama uu la yimid aflaam taariikhi ah kuwaas oo Sunny maqaam sare sii gaarsiiyen waxayna kala ahaayen aflaamtaas Lootere, Darr, Jeet,Ghatak,Border,Ziddi,Daamini iyo kuwa kale.
Markale ayuu filimka Daamini ku qaatay xidigaan abaal marinta Filimfare bixiso qeybta atoora caawiye ha ugui wanaagsan, sanadkii 1999 wuxuu Sunny la yimid filimkiisa ugu horeyay ee uu Director ka ahaa Dillagi waxaana filmkaan la hogaamiyen walaalkiis Boby Deol iyo atariishada Urmila Matondkar waana filim jaceyl ah inkastoo ka guul darestay filimkaan hadana wuxuu qibrad ahaan ka bartay qaabka filimka Director looga noqdi.
Sunny Deol Iyo Burburkii Ku Habsaday Intii Udhaxeysay 2000-2017:
Super Star kaan maqaamka sare Fanka Hindiya ka gaaray intii udhaxeysay 1990-1999 10kaas sano Sunny wuxu noqday atooraha ugu awooda badan Bollywoodka.
balse xidigaan waayahihiisi fanka dhulka ayee galeen markii qarnigaan cusub lasoo gaaray, waxaa xusid mudan in Sunny mudo 17 sano gudahooda u kusameyay 31 Filim misane sedex filim kaliya ay Hit dhamestiran u noqdeyn waa niyad jab weyn.
Sunny kaliya sedexdaan filim ayaa Hit dhamestiran u noqdeyn mudo 17 sano ah oo uu aflaamt sameynaayey Gadar: Ek Prem Katha-All Time Blockbuster (2001), Indian-Hit(2001) iyo Yamla Pagla Deewana-Hit (2011).
28 filim ee kale hal filim oo guulestay o Average xataa malahan guud ahaantoda wey ka guuldaresteyn filimkiisa udambeyay ee Poster Boys guul daro ayuu lakulmay.
Waxaa la rajeynaa Super Star-kaan inuu awoodisa 90kii soo ceshan karo asiga xataa hadeer waa ogyahay oo dhowr jeer ayuu kahadlay inuusan joogin xiligii uu dadka ku kalifi jiray inee tiyaatarada soo buux dhaafiyaan jaceylka waalida ah ee loo qabay aawged Shabakada Filimside soo kabasho xoogleh ayee xidigaan u rajeynee maadama wali nin adag oo aflaamta sameyn kara yahay.
Noloshiisa gaarka ah
Sunny Deol waxa uu guurasaday Pooja Deol lamaanahay waxa ay leeyihiin labo wiil oo la kala yiraahdo Karan Deol iyo Rajvir Deol.
Karan Deol waxa uu ahaa caawiyaha filim soo saaraha filimkii Yamla Pagla Deewana 2 oo ay wadeen Awowgiis, Aabihiis iyo adeerkiisa ee kala ah Dharmendra, Sunny Deol iyo Bobby Deol.
Sido kale Karan Deol waxaa larajeynaa inuu goordhow Bollywoodka lugta soo galin doono maadama abihiis usameynooyo filimka uu wiilkiisa Bollywoodka kusoo gali lahaa kaaso lagu magacaabo Pal Pal Dil Ke Paas haatana duubis ayaa kusocot filimkaan.
Abaal Marinda Ugu Waaweyn Ee Uu Xidigaan Ku Guulestay Taariikh Ahaan:
Waa Jilaa uqalmo abaal marin walbo maadama uu shaashada horteeda kaga run sheego
wuxuu ku guulestay tiro labo jeer ah abaal marinta National Film Award filimkada kala ah Ghayal-Special Jury Award (Abaal Marin Qaas Ah Oo Ay Dowlada Bandhigiisa Ghayal Kusiisay).
Sido kale Filimka Damini ayuu markale National Film Award ku qaatay Best Supporting Actor (Atoore Caawiyaha ugu wanaagsan).
Atooraha ugu fiican ayuu kuqaatay filimka Ghayal
Atoore caawiyaha ugu fiican ayuu filimka Damini ku qaatay.
sido kale bIladaan tiro afar jeer ah ayuu utartama atooraha ugu wanaagsan Best Actor filimada kala ah Betaab (1984 ayuu utartamay),
Ghatak-1997 ayuu utartamay.
Border-1998 ayuu utartamay.
Gadar: Ek Prem Katha-2002 ayuu utartamay.
Dhanka kale Zee Cine Award iyo Star Screen Award uu ku qaatay abaal marinta atooraha ugu fiican filimka Gadar: Ek Prem Katha halka IIFA Award uu isla filimkaan ugu tartamay atooraha ugu wanaagsan sanadkii 2002.
Waad Kumahadsantahay Aqriskaaga.
Waxaa Aqrisay 2,393
4 Responses to Taariikh Nololeedka Bollywood Action Hero Sunny Deol Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
asc asxaaabta filimside waad ku mahadsantihiin… sida quruxda badan aad u soo gudbiseeen taariikhda sunny deol…. lkn waxaa iiga suaal ah labo gabdhood aan ku ogeen in aybla dhasheen sunny…. labadaaab kale intee ka imaadeeen …. waxaan jeclaaa in aad faahfaahin dheeri iga siiso labadaaan gabdhood kale… ileeeen ahana iyo esha waaba ogeeneee… thanks…
Ahana iyo Esha waxaa dhashay Hema Malini waana ku aabo Sunny balse labada gabdhood ee kale Sunny ku hooyo ku aabo waaye waana gabdho aan saxaafada hor imaanin oo reero leh.
Zxp Sakariye Abdi Wan kusalamay marka horw
Flimka Mersel Natiijadiisu Maxay noqotay
Sxb Mersal waa hubaal Hit weyn ayuu noqonayaa balse weli xogtiisa lama soo Update gareenin 5-maalmood ayaan soo bandhignay ganacsigiisa hal todobaad ayaan u sugeynaa in lasoo bandhigo.